डढेलोले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण उच्च, घरबाहिर ननिस्कन मन्त्रालयको आग्रह - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
डढेलोले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण उच्च, घरबाहिर ननिस्कन मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर सूचकांक (एयर क्वालिटी इन्डेक्स–एक्यूआई) जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक तहमा पुगेको छ। उपत्यकाका अधिकांश भेगमा एक्यूआई तीन सयभन्दा बढी पुगेको छ।
बाक्लो तुवाँलोको कारण शुक्रबार आन्तरिक तथा बाह्य उडान प्रभावित बनेको छ। भिजिबिलिटी कम भएका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा अवरुद्ध भएको हो। दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान दिल्ली एयरपोर्टमा डाइभर्ट भएका छन् भने २० वटा आन्तरिक उडान रद्द भएका छन्। भिजिबिलिटी कम हुँदा ८ वटा आन्तरिक उडान डाइभर्ट भएका छन्।
शुक्रबार मध्याह्नदेखि लागेको बाक्लो तुवाँलोका कारण दिउँसो ३ घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै उडान ठप्प भएको थियो। भिजिबिलिटी १ हजार मिटरभन्दा कम भएका कारण दिउँसो २ बजदेखि ४:४५ बजेसम्म उडान अवरुद्ध गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले बताए। विमानस्थल ठप्प भएको समयमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको जहाज आधा घण्टा आकाशमा होल्ड गरेर काठमाडौं अवतरण गरेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। भिजिबिलिटी कम भएकोले एयर इन्डियाको उडान निर्धारित समयभन्दा ढिला काठमाडौंबाट उडेको थियो।
‘११ सय भिजिबिलिटीमा नै नेपाल एयरलान्स र हिमालय एयरलाइन्स काठमाडौं अवतरण गरेका हुन्। तर, २८ सय, ३२ सय भिजिबिलिटी चाहिने फ्लाई दुबई, क्याथे प्यासफिकजस्ता उडान काठमाडौं अवतरण गर्न नसकी डाइभर्ट भएका छन्।’ महानिर्देशक तिवारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेका कारण घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले श्वासप्रश्वासमा कठिनाइलगायत विविध स्वास्थ्य समस्या देखापर्न सक्ने जनाएका छन्। खुला स्थानमा नबस्न, नखेल्न र मर्निङ वाकमा नजान डा. अधिकारीले आग्रह गरेका छन्।
‘घरबाहिर गएर शारीरिक व्यायाम गर्ने गरिएको छ भने रोकौं। घरभित्रै बसौं। घरभित्रै व्यायाम गरौं। बालबालिका, दीर्घ रोगी र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गरौं’, अपिलमा भनिएको छ। अत्यावश्यक नभई सवारीसाधन नचलाउन र पेसा, व्यवसाय निर्माणकार्य सुचारु गर्दा धुलो धूवाँ नउड्ने वा कम हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै फोहोरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने तर फोहोर जलाउने कामलाई निरुत्साहित गर्न र बन्द गर्न अनुरोध गरिएको छ। धुलो, धूवाँ उड्ने खालका पेसा, व्यवसाय, निर्माण कार्य केही दिनलाई स्थगन गर्न, गराउन मन्त्रालयले भनेको छ।
केही दिनपछि त्यस किसिमका पेसा, निर्माणकार्य सुचारु गर्दा धुलो, धूवाँ नउड्ने वा कम हुने व्यवस्था गराउन आग्रह गरिएको छ। घरबाहिर निस्कनै पर्ने अवस्था आएमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न कोभिड—१९ का लागि तोकिएका जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गराउन अपिल गरिएको छ।